Ampidino Sushi Roll 3D APK ho an'ny Android
Ampidino Sushi Roll 3D
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Android (74.00 MB)
Ampidino Sushi Roll 3D,
Sushi Roll 3D dia lalao Android manaingoana izay hitantananao trano fisakafoanana manolotra sakafo Japoney. Sasao, tetehina ary horonana mba hamoronana sushi tsara indrindra aminity lalao mahandro mahavariana ity. Arakaraka ny ahodinkodinao ny sushi no mahasambatra ny mpanjifanao ary arakaraka ny habetsaky ny vola ho azonny trano fisakafoanana anao! Manolotra sushi matsiro, lalao mahaliana sy mahafa-po, rivo-piainana ASMR milamina ary ny fahafaha-mitantana trano fisakafoanana anao manokana, Sushi Roll 3D dia azo sintonina maimaimpoana aminny Google Play ka aminny telefaona Android.
Ampidino ny Sushi Roll 3D
Ampiharo ny fahaizanao antsy aminny karazana sakafo Japoney. Tsy mifarana hatreo ny fialam-boly mahandro! Manandrama zava-baovao aminny alàlanny lalao kely mahavariana. Omeo fahafaham-po ny mpanjifa na araho maso ny fihetsikizy ireo aminny fanomanana haingana ny sakafo misy kalitao miaraka amina karazan-tsakafo isan-karazany (mety hilentika izy ireo na ho tezitra aminny sakafo tsy dia vita) Rehefa manao sushi dia alao antoka fa ahazoanao akora mety tsara ary ialao ireo zavatra hisakana anao tsy hihinana sakafo matsiro indrindra. Mitandrema; tsy misy vahiny maniry ahidrano be loatra sy trondro kely loatra, na mbola ratsy kokoa aza, zavatra mivoaka avy ao aminny sushi!
Hofoananao ny ahiahinao aminny tena fiainana rehefa mandalo ny haavonny lalao ianao. Ampiasao aminny tontolo iainana ASMR miady aminny adin-tsaina ny masonao sy ny sofinao rehefa miofana ho lasa master sushi ianao. Ity lalao miala sasatra miaraka aminny sary mahavariana ity dia hahatonga anao hanonofy sushi.
Beat ny haavonny fanamby mihoampampana hahazoana vola madinika bebe kokoa ary hamaha sushi sy haingon-trano vaovao.
Asandrato ny fahaizanao sushi hahazoana valisoa boaty tsy ampoizina tsara kokoa, anisanizany ireo akora vaovao, fitaovana fanapahana ary fihetsika.
Manakodia sy mametaka sushi, mandanjalanja ary manapaka trondro, manosotra fromazy, manaova vary, mandanja paty ao anaty boaty fitondra ary bebe kokoa aminny lalao mini samy hafa.
Miaraha miasa aminireo akora mahazatra toy ny trondro, vary, ahidrano ary ahazoana akora manokana toy ny sakay, durian ary caviar rehefa mandroso ianao.
Amboary ny trano fisakafoanana misy fanaka vaovao, sakafo hariva, haingon-trano sy kojakoja fampitomboana ny vola miditra.
Hizaha toetra ny fahaizanao aminny akora hafahafa sy tsy ampoizina aminny ambaratonga bonus mahafinaritra.
Mialà sasatra ary ankafizo ity lalao ASMR ity miaraka aminny feo fanoherana adin-tsaina, sary ary fitsaboana mahafinaritra.
Ny interface mora-sy-mianatra-mora ampiasaina dia manamora ny mitsambikina sy mihodina.
Haben'ny rakitra: 74.00 MB